स्वास्थ्य संकटकालकाे तयारी, निजी संरचना पनि सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्य संकटकाल’ लगाउने विषयमा गृहकार्य थालेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण उच्च दरमा फैलिएसँगै मन्त्रालयले नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने तयारी गरेको हो ।
‘स्थिति जटिल छ । बिरामीले अस्पतालमा बेड नपाउने अवस्था छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन जरुरी छ । यसबारे मन्त्रालयले होमवर्क गरिरहेको छ ।’
निषेधाज्ञा लगाएर पनि महामारी नियन्त्रण गर्न कठिन बन्दै गएकाले स्वास्थ्य संकटकालको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने मन्त्रालयले तयारी गरेको हो । कोरोनाको पहिलो लहरमा पनि मन्त्रालयले स्वास्थ्य संकटाकालको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको थियो । तर पास भएको थिएन । पहिलाे लहरमा संक्रमितको संख्या २ हजार र मृतकको संख्या १० पुगेपछि मन्त्रालयले संकटकालको प्रस्ताव लगेको थियो ।
तर, दोस्रो लहरमा आइपुग्दा एकै दिन आइतबार नै ७ हजार २ सय ११ जना संक्रमित थपिए भने २७ जनाको मृत्यु भयो । हालसम्म ३ लाख ३६ हजार ३० जना संक्रमित हुँदा ३ हजार ३ सय २५ जनाको मृत्यु भएको छ । एक्टिभ संक्रमित ४८ हजार ७ सय ११ जना पुग्दा २ लाख ८३ हजार ९ सय ९४ जना निको भएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमण उच्च गतिमा बढेकाले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने स्पष्ट पारिसकेको छ । यसको मतलव अब स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनुको विकल्प छैन भन्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम संकटकाल लगाउँदैमा राेगकाे निदान नहुने बताउँछन् । ‘यो रोगको उपचार छैन’, उनी भन्छन्, ‘उपचार नुहुने रोगमा सरकारले गरेन भनेर हुन्छ ? भीड घटाएर कन्ट्रोल गर्ने हो । यो जनताको सहयोगबिना सम्भव छैन ।’
नियन्त्रण गर्नबाट सरकारले हात नउठाएको उनको दाबी छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम सचेत गराउने हो । हामीले जे देख्यौँ, त्यो बोलेका हौँ’, उनी भन्छन्, ‘अब भयानक छ भन्न किन लाज मान्ने ? सरकारले हात उठाएको होइन । मानिसलाई सचेत गराएका हौँ ।’
पछिल्ला दिनमा अस्पतालमा बेड, आईसीयू, भेन्टिलेटर भरिएका छन् । बेड अभावमा बिरामीलाई बाहिरै राखेर उपचार गर्न अस्पतालहरू बाध्य छन् । अब थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिएको बिरामीको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरू पनि बताउँछन् ।
‘यही गतिमा संक्रमण फैलिए अक्सिजन नपाउने अवस्था आउँछ’, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. सन्तकुमार दास भन्छन्, ‘हाम्रो हेल्थ केयर सिस्टम कमजोर छ । धेरै धान्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले नै कन्ट्रोल गर्न र क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा डा. विराजमान कर्मचार्यले संक्रमण दर उच्च गतिमा फैलिएकाले तत्काल महत्त्वपूर्ण निर्णय नगरे जटिल दिन आउने बताएरसमेत सरकार स्वास्थ्य संकटकालकाे विकल्पतिर लागेकाे संकेत दिए ।
‘भयावह दिन आउन नदिन हामी सबैको हात छ । अहिले नै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेन भने जटिल दिनको सामना गर्नुपर्छ’, उनका अनुसार यही गतिमा संक्रमण फैलिए प्रतिदिन १ सय ४९ जनाको मृत्यु हुने देखिन्छ ।
नेपालमा कोरोनाको तथ्यांकले पनि संकट देखाउँछ । अघिल्लो हप्ताको तुलनामा यो हप्ता १३६ दशमलव ८ प्रतिशतले संक्रमण बढेको कर्माचार्यकाे भनाइ छ । 'याे अघिल्लो हप्ताभन्दा दुई गुणाले बढी हो’, उनी भन्छन्, ‘छिटोछिटो संक्रमण फैलिएको तथ्यांकले प्रस्ट पार्छ ।’
अब स्वास्थ्य संकटकाल : चिकित्सक संघ
संक्रमण उच्च गतिमा फैलिएकाले चेन ब्रेक गर्न स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सरोकारवाला निकायले पनि माग गरेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघले विज्ञप्ति नै निकालेर स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
नागरिक हक र मौलिक हकमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिन्छ । यो संकटकाल राजनीतिक कारणले घोषणा गर्न लागिएको जस्तो होइन । त्यसैले संशय मान्नुपर्ने छैन । संक्रमण रोग ऐन २०३०, संक्रामक रोग ऐन २०२०, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार याे संकटकाल लगाइन्छ । यी ऐनका आधारमा सरकारले स्वास्थ्यमा आपत्कालीन सेवा घोषणा गर्ने हो ।
‘जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएमा, महामारीको अवस्था आएमा जनस्वास्थ्य ऐनमा संकटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था छ,’ कानुनका विज्ञ टीकाराम भट्टराईले भने, ‘सरकारलाई काम गर्नका लागि सजिलो होस् भनेर स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने हो ।’
स्वास्थ्य संकटकाल लाग्यो भने के हुन्छ ?
निजीक्षेत्रका संरचना अथवा सम्पत्तिहरू केही समयका लागि सरकारले लिन सक्छ । जस्तैः निजी अस्पताल, होटल, लज, पार्टी प्यालेस, विद्यालय, कलेज वा व्यक्तिको घर । समय तोकेर निश्चित समयका लागि सरकारले अस्थाई स्वामित्त्व स्थापना गर्न सक्छ ।
कुन–कुन वस्तु वा सेवामा कसरी सरकारले आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्छ । त्यो संकटकालको आदेशमा भर पर्छ । ‘सरकारले के–के प्रयोग गर्ने भन्ने स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्दा जारी गरिने आदेशमा उल्लेख गरिएको हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘त्यो आदेशमा के–के आउँछ, त्यहीअनुसार हुन्छ ।’
आदेशमा के गर्न पाइने, के गर्न नपाइने भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिने आवश्यक सामग्री खरिद गर्न चाहेमा गर्न पाउनेसम्मको आदेशमा जारी गर्न सक्छ ।
दुरुपयोग हुने सम्भावना
संसद् र प्रतिपक्षी बलियो नभएमा दुरुपयोग हुने सम्भावना देख्छन् भट्टराई । ‘संसद् र प्रतिपक्षी बलियो भयो भने दुरुपयोग कम हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले संसद् र प्रतिपक्षी दुवै कमजोर छन् । जनताको अधिकार र दुरुपयोग हुने डर छ ।’
काेराेना संकट : सरकारले लत्तो छाड्यो, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै भाषण बिर्सिए
‘कोरोनाले सुनामीको संकेत दियो, लापर्बाहीले हद नाघ्यो’
नेपालगञ्जमा धान्नै नसक्ने गरी बढ्यो कोरोना, अस्पतालको आँगनमै बिरामीको बेहाल
नेपालगञ्जका चिकित्सकहरूको गुहार : ‘हामी लडाइँमा छौँ, बेड, अक्सिजन र जनशक्ति दिनुहोस्’
९० प्रतिशत बिरामी अक्सिजनको सहारामा, भरिए अस्पताल, बेड पाउनै गाह्रो
उनी लाख बत्ती बाल्न दाङबाट पशुपति आएका थिए, कोभिडले पशुपति त पुर्‍यायाे, तर मृत (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १९, २०७८, २१:१९:००